.ဘုရငျမကွီး ရှငျစောပုကိုးကှယျခဲ့တဲ့ဘုရားကို အိမျကိုပငျ့ဆောငျပွီး အဖိုးတနျပစ်စညျး‌‌ တှေ လှူဒါနျးခဲ့တဲ့ အိမျ့ခဈြတို့ ဇနီး‌‌မောငျနှံ. – Thukhuma
.ဘုရငျမကွီး ရှငျစောပုကိုးကှယျခဲ့တဲ့ဘုရားကို အိမျကိုပငျ့ဆောငျပွီး အဖိုးတနျပစ်စညျး‌‌ တှေ လှူဒါနျးခဲ့တဲ့ အိမျ့ခဈြတို့ ဇနီး‌‌မောငျနှံ.
ပရိသတ်ကြီးရေ အဆွေးသီချင်းလေးတွေ သီဆိုလေ့ရှိပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ တေးသံရှင် အိမ့်ချစ်ကတော့ မကြာသေးမီကမှ သူမချစ်သူနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလေးတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ ။ ဘာသာရေးလိုက်စားပြီး ဘုရားတရားအမြဲပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့အိမ့်ချစ်ကတော့ ဒီနေ့မှာ သူမရဲ့ အလှူလေးတစ်ခုကို ပရိသတ်တွေကို ဝေမျှပေးလာခဲ့ပါတယ် ။
ဒီနေ့မှာတော့ အိမ့်ချစ်တို့ ဇနီးမောင်နှံက မွန်ဘုရင်မကြီးရှင်စောပုကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ အောင်သိဒ္ဓိဘုရား များကို (၇) ကြိမ်မြောက်အိမ်သို့ပင့်ဆောင်ပူဇော်ပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုEric နဲ့ အိမ့်ချစ်တို့ရဲ့ စေ့စပ်လက်စွပ်နှစ်ကွင်းကို လှူဒါန်းခဲ့တဲ့အကြောင်း ပရိသတ်တွေကို ဝေမျှပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ ပရိသတ်တွေကတော့ သူမတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပစ္စည်းလေးကို လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ သူမတို့ရဲ့အလှူလေးကို သာဓုတွေ အများကြီးခေါ် ဆိုခဲ့ကြပါတယ် ။
အနုပညာညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေနဲ့ အတူ အိမ့်ချစ်ရဲ့ ပရိသတ်တွေက ယခုအလှူလေးမှသည် အလှူအတန်းပေါင်းများစွာ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ သူဖြစ်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းလေးတွေ တောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ် ။ အိမ့်ချစ်ရဲ့ပရိသတ်တွေလည်း သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်စေဖို့ အလှူပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်းမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
.စိတျထားလေးကနူးညံ့ပွီးလူတနျးစားမခှဲခွားတတျလို့ ဘယျနရောမှာမဆို ပကာသနကငျးမဲ့စှာ စားသောကျ‌နထေိုငျတတျတဲ့ ပိုငျတံခှနျ.
. ခဈြရတဲ့မောငျက တနျဖိုးကွီးစိနျလကျစှပျနဲ့ Surprise လာလုပျလို့ ရငျခုနျပြျောရှငျပွီး အခဈြတကယျရှိကွောငျးသိလိုကျရတဲ့ ဖွူဖွူကြျောသိနျး.